We Fight We Win. -- " More than Media ": ခေါင်းဆောင်မှု အပေါ် လေ့လာ စမ်းစစ် ခြင်း။ (Analysis on Leadership)
ခေါင်းဆောင်မှု အပေါ် လေ့လာ စမ်းစစ် ခြင်း။ (Analysis on Leadership)
Analysis on Leadership:
Burma: The corruption ofastate which unifies the moral, political, economic and social causes (Part I)
“Ifaleader repeatedly shows poor judgment, even in little things, people start to think that having him or her as the leader is the real mistake.”
အကယ်၍ ခေါင်းဆောင် သည် အသေးအဖွယ် အကြောင်းအရာကိစ္စ များတွင် ပင် ထပ်တလဲလဲ ညံ့ဖျင်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကို ပြုလုပ်လာခဲ့ သော်၊ လူထု က ထိုခေါင်းဆောင် ရှိခြင်း သည် တကယ့် မှားယွင်းမှုကြီး အဖြစ် စတင် တွေးထင်လာပေလိမ့်မည်။
“Improvement is impossible withoutachange in leadership.”
ခေါင်းဆောင်မှု ပြောင်းလဲမှု မပြုသ၍ တိုးတက်မှု မဖြစ်နိုင်ပေ။
The real test of leadership isn’t where you start out. It’s where you end up.
ခေါင်းဆောင်မှု ကို စစ်ဆေး ရာတွင် ဘယ် က စခြင်း ထက် ဘယ် ကို အဆုံးသတ် မလဲ ဟူ၍ သာဖြစ်သည်။
ခေါင်းဆောင်သည် နေ့ခြင်း ညခြင်း ပေါ် ထွက်လာခြင်း မဟုတ်။ နေ့စဉ် တိုးတက် လာအောင် အားထုတ်ယူရသည်။
( Ref: John C. Maxwell. “The 21 Irrefutable Laws of Leadership”)